Khilaafka xisbiga Kulmiye oo sababay xarriga xildhibaano deegaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Berbera – Mareeg.com: Khilaafka u dhaxeeya xisbiga talada haya ee “Kulmiye” ee maamulka Somaliland ayaa cirka isku shareeray waxaana khilaafku gaaray in la xiro mas’uuliyiin ka tirsan xisbigaas oo labo garab oo kala jabay.
Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee gobolka Saaxil Yuusuf Axmed Maxamed (Halac Dhegoole) iyo laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka Berbera ayaa maanta xabsiga loo dhaa-dhiciyey.
Labada Xildhibaan ayaa lagu kala magacaabaa Daahir Aw-nuur iyo Rashiid Aw-Xassan, waxaana labudaba ka tirsanaayeen Xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye oo hadda khilaafka ba’an uu ka dhex aloosan yahay.
Guddoomiyaha Gobolka Saaxil, Fahmi Cali Bidaar ayaa saxaafadda u sheegey in masuuliyiinta la xirey ay faraha kula jireen arrimo amniga wax u dhimaaya oo ay soo ababuleen mudaaharaad aysan fasax u haysan, waxaana la horgeynayaa caddaaaladda ayuu yiri.
Wararka ayaa sheegaya in isu soo bax uu soo abaabuley Halac Dhagoole uu maanta ka dhacay magaalada Berbera, kaas oo ciidamada Boolisku rasaas ku kala eryeen kadibna xabsiga dhigeen masuuliyiintii horkacaysa dadka taageersan Muuse Biixi.
Xisbiga ayaa u kala jabay laba garab, qeyb ayaa raacsan madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumaddiisa, halka qeyb kalana taageereen gudoomiyaha xilligan ee Kulmiye Muuse Biixi.
Khilaaf nuucaan ah oo horay uga dhex qarxay xisbigii horay u heyn jiray talada maamulkad Somaliland ee “UDUB” ayaa keenay inuu xisbigaasi gebi ahaan burburo.